Cunto: Waa Maxay Daaro.com Kharaj?
Haddii aad si joogto ah u eegto koontada Google Analytics, waxaa laga yaabaa in aad aragto qaar ka mid ah ilo soo gudbin ah oo ku yaalla waddooyinka iibsiga. Marka la eego, ilahaasi waxay u muuqdaan kuwo aan waxba galabsan ilaa aad si fiican u hubiso waxa dhacaya xogtaada falanqaynta. Websaydhiyaal kala duwan iyo bloggers waxay ogaanayaan xaddi badan oo gaadiid ah oo ku imaanaya boggooda internetka ee darodar - groove metal mikrotik.com. Sare khabiir, Julia Vashneva, ayaa ka digtay in gaadiidka been-abuurka ahi aanu ku koobnayn darodar.com, wuxuu ka yimaadaa tiknoolajiyado kale iyo xidhiidhkooda la xidhiidha sida websitebuttons, kambasoft, 7maemoneyonline, iyo kuwo kale. Goobahaasi waxay kor u qaadayaan calanka casriga ah ee webmasiga ah, ganacsatada, iyo ganacsatada, waana waqtigii lagu ogaan lahaa waxa darodar.com iyo sida adeegga spam u gudbinta u shaqeeyo
Waa maxay Daroor?
Sanadkii 2013, qaar ka mid ah dadka websaydhka ah ayaa arkay booqashooyin khaas ah oo ka yimid goob la yiraahdo darodar.com iyo kala duwanaanshaheeda. Dadku waxay ogaadeen in goobahooda ay heleen 200 illaa 2000 booqasho bishii laga soo bilaabo website-yo qariib ah oo laga shakisan yahay, qiyaasta cirifka ayaa ah 100% taasoo macnaheedu yahay in dadka soo booqday aysan ku bixin wax ka badan labaad oo ku yaal boggooda. Dhawaan ayaa milkiilayaasha goobta iyo kuwa websaydhku ay ku foorarsadeen darodar sida shabakadda ugu sarraysa ee spam.
Waa ammaan in la sheego in daroogooyinka shirkadaha darrada ah lafteeda ay yihiin shirkadda ugu fiican ee SEO ah oo gacan ka geysta hagaajinta darajada boggaaga. Xaqiiqdii, shirkaddani waxay hoos u dhigeysaa koontada Google Analytics oo leh calaamado been abuur ah iyo dhibaatada ugu weyni waxay tahay in aysan suurtagal ahayn in laga takhaluso isbeddelka gudbinta. Khubarada websaydka ayaa sheeganaya in darodar uu keenay taatikada madow ee madow ee SEO si dib loogu noqdo. Shirkadani waxay u muuqatay in ay tahay saansaan u gudbinta spam iyo qalabka loo yaqaan 'webmaster tools' oo bartilmaameed ka ah shabakadaha yaryar iyo kuwa waaweyn oo leh martida hoose. Si kale haddii loo dhigo, waxaan dhihi karnaa in boggan uusan ku dhibin inuu keeno gaadiid dhab ah oo bartilmaameedsanaya ganacsiyada yaryar iyo dhexdhexaad ah si loo hagaajiyo darajadooda.
Waa in aanad marnaba booqanin darrada.com ama goob kale oo xiriiriye ah haddii aad rabto inaad hubiso ammaankaaga internetka. Sidoo kale, waa in aanad isticmaalin plugins-ka iyo ha isku dayin inaad ka saarto darrada.com ka soo natiijooyinka raadinta raadinta . Si aad ah u culus, waa inaad iska nadiifisaa xuddunta si aad u hubiso in darrada.com iyo kuwa ay ku biiraan aysan mar dambe soo bandhigin taariikhdaada. Si aad uga takhalustid spamkan gudbinta, waa inaad ka saartaa xisaabta Google Analytics. Inkastoo aysan weligeed joojin doonin bokiska laga furo boggaaga, waxay ka takhalusi doonaan xogta kuxirsan ee ku wareegsan darrada.com iyo boggaga internetka. Waxaad kaloo xayiri kartaa darodar.com faylka faylka .htaccess, taasina waxaa lagu sameyn karaa adigoo gelinaya lambar khaas ah oo ku yaal boggaaga sare.